Ebe Google> Ibe Google Plus (maka Ugbu a) | Blog MarTech
Monday, November 14, 2011 Monday, October 26, 2020 Kevin Mullett
Nke a ga-abụ ọkwa ọzọ na - agba gị ume ka ị gaa nke gị Gugulu Plus peeji nke maka azụmahịa ozigbo, ọ gaghị enye gị ntuziaka ka ị ga-esi mee ya. N'eziokwu, nke ahụ bụ ihe m na-atụ anya ịtụ aro na mwepụta nke Google+, yana agbanyeghị nkwadebe m maka webinar na njedebe ahụ, m ga-akwụrịrịrịrị ịnye ihe ọzọ… maka ugbu a.
Gịnị ma ị banye naanị na mmiri? Ọfọn, ọ bụ ezie na anyị kwesịrị ịhapụ maka eziokwu ahụ Google Pages ka dị ọhụrụ, ha eruola nso na ọtụtụ isi mpaghara. Ndị a bụ ole na ole:
O dighi egosi na enwere nchebe ọ bụla n'ime ebe iji gbochie mmadụ iji aha azụmahịa gị mepụta ibe.
naanị otu admin kwa ibe kwere, ma enweghị usoro nnyefe dị ugbu a. N'aka ozo, oburu na m hapu Cirrus ABS, apughi m iwepu ikike m na peeji nke akara nke Cirrus ABS (obu ezie na Google kwuru na ona aru oru na nsogbu a).
O megidere TOS ka mepụta akaụntụ adịgboroja, ya mere, na-ekwu okwu na teknụzụ, onye dị adị kwesịrị ịtọlite ​​akaụntụ Google+. Nke a na - eweta nsogbu mgbe onye isi ụlọ ọrụ, onye nnọchi anya iwu, ma ọ bụ onye nwe ya abụghị onye na - achịkwa ọwa mmekọrịta. (lee okwu gara aga)
Peeji nke Google+ na-egosi na nsonaazụ njin ọchụchọ (SERPs) mana ọbụghị ogo nke ọma maka ebughi aha ahia (ma).
The usoro ngosi bụ naanị ihe ọchị. Enweghị ozi ngosi a na-ahụ anya na mmadụ etinyela aka na ibe gị belụsọ ma imeghere ibe akara. Google+ anaghị eziga ozi email. Ogwe uhie uhie Google na-egosi naanị ọkwa nke onwe ha.
Na-agbagharị otu ika na ma ika gá »‹ jikwaa na gá »‹ Google akaụntụ gá »‹ na-achá »way uzo ukwuu echiche.
N'otu aka ahụ, circling na ika ị na-elekọta chọrọ nkwekọrịta dijitalụ. Ma n'ezie na ị nweghị ike ịgbanye akaụntụ Google+ gị onwe gị site na ibe ika gị ruo mgbe ị chọtara otu esi ebu ụzọ kpoo ibe gị aha. Agbaghaala ma?
Enwere m ike ịga n'ihu jụọ ihe kpatara enwere ihe eji egwu egwuregwu na ibe anyị, mana n'eziokwu, nke ahụ enwechaghị mmetụta na uru bara uru ịmepụta Google+ Peeji; ọ na - eme ka nav dịkarịrị onye ọrụ enyi. Isi okwu m bụ, nyere na enwere ọrụ ndị ọzọ dị elu ahịa bara uru, ikekwe anyị kwesịrị ịhapụ anụ Google ka ọ pụta ntakịrị.
M na-atụ aro na azụmaahịa ga-ebu ụzọ hụ na ịkwalite ma bulie ibe Google Ebe ha tupu ha ekwuo onwe ha na ibe Google+. Amaara m na Google+ dị ọhụrụ, na-egbu maramara, ma nwee ike ịghọ ụzọ dị mma iji jikọọ ndị ahịa, mana enweela ndekọ ndekọ ogologo oge nke uru metụtara peeji Google Ebe kachasị mma. Ọ bụrụ n’itinyebeghị ikikere, ma ọ bụ na ịchọrọ ime ka ihu akwụkwọ Google Ebe gị dị ọhụrụ, gafere ya Ebe Google.
Ugbua ka ebe Google gị gwụla? Nhọrọ m nke abụọ ga-abụzi ọnọdụ ndị ọzọ dị ka Yelp na Bing. Buru n'uche na Siri, na iPhone 4s ọhụrụ, na-eji Yelp. Bing nwere ọtụtụ nchọta ekwentị mkpanaaka naanị, ebe ọ bụ na nsonaazụ ọchụchọ Yahoo sitere na Bing, nke ahụ na-etinye nyocha BingHoo na gburugburu 30%. Iji mee ka ọ dị mfe, naanị gaa jidere ndị a niile na ndepụta na nwetaListed.org.
Tags: ebe googlegoogle plusgoogle tinyere peejigoogle +ASocial Media Marketing
Mgbasa ozi na ịlaghachi na ntinye ego
Nov 14, 2011 na 2:44 PM
Akwa post! Ihe na-atọ ọchị bụ na naanị taa achọpụtara m na mmadụ etinyela ihu akwụkwọ “Google Analytics” yana ọbụlagodi akara ngosi Google na ya. Anya nlebara anya; agbanyeghị, na-egosi na mmadụ tarapụrụ akara Google nke ọma. Oke ochi! Na ụdị ogbi nke Google ebuteghị peeji nke ya mgbe ọ malitere ibi ndụ na njirimara ahụ.
Nov 14, 2011 na 3:58 PM
I chefuru otu, olee otu ha siri jikota Ebe na G + peeji nke akara yet gethụnanya getlisted.org (site na ntụnye gara aga n'aka gị)
Nov 14, 2011 na 8:59 PM
Ekwesịrị m ịkwụsị ebe Chris. Ahapụkwara m nnupụisi nke URLs ndị na-enweghị isi, mmadụ 5000 / akara okirikiri, yana ọtụtụ ndị ọzọ.
Mar 24, 2012 na 12: 12 PM
ru sure banyere 5000 ppl?! Echere m na naanị facebook nwere oke ahụ! ọ fọrọ nke nta ka m jide n'aka!
Nov 14, 2011 na 4:00 PM
Echiche m kpọmkwem, Kevin! Ezie na m nwere ọtụtụ fun mwube a G + ika peeji nke m Blọgụ gbadoro ụkwụ, Agaghị m atụ aro ka ibe G + maka azụmaahịa ọ bụla ka dị (Ebe ọ bụ na enweghị m ihe ọ bụla ga-efunahụ na blọgụ ahụ). Amaara m na m na-enwe ekele maka Google na-enye ohere ịnweta ụfọdụ n'ime ngwaahịa beta ha, mana nke a bụ obere beta maka onye ọ bụla nwere oke na ọnụnọ SM ha.
Nov 14, 2011 na 8:06 PM
Daalụ nke ukwuu maka post a Kevin! Ewezuga gị, enweghị m ike ịnagide ikpo okwu… ị Rock.